कस्तो अचम्म ! नाङ्गै खाना खाने रेष्टुरेन्ट – Everest Dainik – News from Nepal
कस्तो अचम्म ! नाङ्गै खाना खाने रेष्टुरेन्ट
एटलान्टा । बजारीकरण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको चरमरुपभन्दा फरक नपर्ने एउटा उदाहरणको रुपमा लण्डनको बुनयादी रेष्टुरेन्टलाई लिन सकिन्छ ।
सो रेष्टुरेन्टमा खाना खानका लागि ४६ हजार मानिस प्रतिक्षाको सूचिमा छन् जुन तीन महिनासम्मको लागि हो । त्यहाँभित्र सेल फोनमा कुरा गर्न र कुनै तस्बीर लिन पाइँदैन । एक सेट डिनरको एक सय यूरो तिर्नु परेको एक ग्राहकले बताए । -एजेन्सी